नमूना मतपत्र सार्वजनिक, कुन जिल्लाको कस्तो छ त ? - Everest Dainik - News from Nepal
नमूना मतपत्र सार्वजनिक, कुन जिल्लाको कस्तो छ त ?
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नमूना मतपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तथा विराटनगर, वीरगञ्ज र भरतपुरको नमूना मतपत्र भने सार्वजनिक गरेको छैन । ६ वटा महानगरपालिका र भक्तपुरमा पछि मतपत्र छाप्ने आयोगले जनाएको छ । अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेपछि मात्र छपाइ गरेर ढुवानी गर्ने तयारी आयोगको छ ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले ४९ जिल्लामा मतपत्र ढुवानी गरेको छ । सडक तथा हवाईमार्गमार्फत् ४९ जिल्लामा मतपत्र ढुवानी गरिएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भइसकेको छ । प्रदेश १ का मोरङबाहेक सबै जिल्ला र गण्डकीको पोखरा महानगरबाहेक सबै स्थानमा मतपत्र ढुवानी भइसकेको छ । बागमती प्रदेशका पाँच जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेको आयोगले जनाएको छ ।
आज आइतबार लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा मतपत्र पठाइने निर्वाचन आयोगका मुद्रण बिभागले जनाएको छ । काठमाडौंबाट लामो दूरीमा रहेका पूर्व र पश्चिमका अधिकांश जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेको छ भने अन्य जिल्लामा पुग्ने क्रम जारी छ । मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा हेलिकोप्टरबाट मतपत्र ढुवानी गरिएको छ ।
कुन जिल्लामा कस्तो छ मतपत्र, नमूना मतपत्र हेर्नु यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।